China E-Bike Rental Solution Factory နှင့်ပေးသွင်းသူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများဈေးသည် | Tbit
Two- ဘီး Intelligent ထုတ်ကုန်
E-bike & Sharing Scooter မျှဝေခြင်း
စမတ် E-bike ဖြေရှင်းချက်
E-Bike Rental Solution - တရုတ်စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ
ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးသတိပြုမှုနှင့်ပြုပြင်မှုသတိရမှု၏ရလဒ်အနေဖြင့် E-Bike Rental Solution အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေရာတိုင်းဝယ်လက်များကြားကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးသည်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ အသေးစိတ်အတွက် Global Positioning System, စက်ဘီးပလက်ဖောင်းကုန်ကျစရိတ်မျှဝေခြင်း, စမတ် Scooter ထုတ်လုပ်သူ,ဆိုင်ကယ် Iot မျှဝေခြင်း။ သင်၏ထောက်ခံမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရအာဏာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့လည်ပတ်ရန်အတွက်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိဖောက်သည်များကိုလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ထုတ်ကုန်များသည်ဥရောပ၊ အမေရိက၊ သြစတြေးလျ၊ Bandung၊ နမီးဘီးယား၊ နယူးယောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒသို့ "အရည်အသွေးပေါ် အခြေခံ၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ရန်၊ ပထမတန်းစားအမှတ်တံဆိပ်ကိုရှာဖွေရန်" ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တောက်ပသောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်ဤရွှေအခွင့်အလမ်းကိုယူလိမ့်မည်။
မျှဝေ Scooter IOT WD-209
Two- ဘီး Intelligent ကုန်ပစ္စည်း WD-295
ebike IOT WD-215 ကိုမျှဝေခြင်း
Two- ဘီး Intelligent ကုန်ပစ္စည်း WP-100
GPS စနစ် Tracker မော်ဒယ် NB-100
GPS စနစ် Tracker မော်ဒယ် WA-100
Two- ဘီး Intelligent ကုန်ပစ္စည်း BT-320
GPS Tracker Model WD-108
ဘလူးတုသ် Road-spike BT-102
Two-wheeled Intelligent Product WA-290
Zoomo သည် e-bike subscription offer များကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းရရှိခဲ့သည်
Zoomo သည်အီလက်ထရောနစ်စက်ဘီးဖြင့် ၀ ယ်ယူမှုများတိုးချဲ့ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းရရှိခဲ့သည်။ အစားအစာဖြန့်ဝေရန် Zoomo သည်အီလက်ထရောနစ်စက်ဘီးငှားရမ်းရာနေရာတွင်ထူးခြားစေသည်။ ... သို့သော်မြို့ကြီးများသို့ပို့ဆောင်ရန်အတွက် e-bikes သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောဖြေရှင်းနည်းကိုပေးသည်။
၀ င်ငွေနည်းပါးသော ၀ န်ထမ်းများအား e-bikes များကိုရှေ့ပြေးအစီအစဉ်
... ဒေသခံ e-bik ငှားရမ်းကုမ္ပဏီဖြစ်သော Roll ၏အကူအညီဖြင့်အစီအစဉ်အတွက်။ ... e-bike အစီအစဉ်သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာရရှိနိုင်သော ...
ဂျာမန်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ကယ်ဈေးကွက်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၈၄ ဘီလီယံသို့ရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ထားသည်။
ဥရောပအီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ကယ်စျေးကွက်သည်ကြီးထွားမှုနှုန်း ၁၆ ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် e-ငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သောကဏ္bikeများစွာတွင် e-bik application များကိုလက်ခံကျင့်သုံးခြင်း ... ReportLinker သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသုတေသနဆုအတွက်ဖြစ်သည်။ ။
E-bike Market 2021 Opportunity, Manufacturer, Country ...
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် E-bike အတွက်စျေးကွက်လမ်းကြောင်းများ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် e-bike ငှားရမ်းခြင်းကဲ့သို့သောကဏ္severalများစွာတွင် e-bike application များအမြောက်အများကိုရယူပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့် e-bikes ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် အကောင်းဆုံးသောအဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ကြီးမားသောပစ္စည်းငှားရမ်းခြင်းစျေးကွက် - ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခန့်မှန်းချက် ...
၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြီးစားစက်ပစ္စည်းငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်း၏ ... ဂူဇင့်၊ အငှား (Thailand) Co. , Ltd ။ , Hillcon, Asia Machinery Solutions Vietnam နှင့် INA ... Global E - bike Sharing Service Market Growth (Status and Outlook) 2020 -2025
Lime သည် NIU Electric Scooters ကို၎င်း၏ငှားရမ်းခြင်းရေယာဉ်သို့ထည့်သည်
Lime သည် pedal-assisted e-bike ငှားရမ်းခြင်းများကိုတိတ်တဆိတ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီးထိုအစီအစဉ်၏အောင်မြင်မှုကခရီးသွားလာခြင်းအတွက်ဖြေရှင်းချက်အသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
Maud 2020.12.28 19:17:13
ကျွန်တော်တို့ဟာကုမ္ပဏီလေးတစ်ခုကိုစတင်တည်ထောင်ခါစလေးပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးအကူအညီများစွာပေးခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့အတူတကွတိုးတက်မှုစေနိုင်သည်ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်!
အီလင်း 2020.09.23 05:53:06
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်“ သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အရည်အသွေးမြင့်မားမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု၊ ဖောက်သည်များ၏အမြင့်ဆုံး” လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအယူအဆကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်, ငါတို့လွယ်ကူသောခံစားရ!
ကက်သရင်း 2020.05.19 11:16:24
၎င်းသည်ရိုးသားပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်အလွန်အဆင့်မြင့်ပြီးထုတ်ကုန်သည်အလွန်လုံလောက်သည်၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းမရှိ။
Beryl 2020.04.29 01:54:09
Rigoberto Boler 2020.03.30 22:12:14
ပုလဲ 2020.01.30 07:41:28
ထိပ်တန်း Scooter မျှဝေကုမ္ပဏီများ
Global Positioning System အကြောင်း
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ positioning ကိုစနစ်ခြေရာခံ
TBIT သည်ဘီးနှစ်ဘီးစက်ရုံတွင် ၁၄ နှစ်ကြာယုံကြည်ရသောနာမည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တစ်နိုင်ငံလုံးရှိဖောက်သည် ၃၀၀ ကျော်အားဂုဏ်ယူစွာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
1501-1508 ယူနစ်, 15F, SDGI အဆောက်အ ဦး B, အဘယ်သူမျှမ။ ၂ Kefeng Rd.518000၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဥယျာဉ်၊ Nanshan ခရိုင်၊ Shenzhen, China